Somaliland oo war xasaasi ah ka soo saartay diyaaradii ay DF ka celisay Hargeysa - Caasimada Online
Home Somaliland Somaliland oo war xasaasi ah ka soo saartay diyaaradii ay DF ka...
Somaliland oo war xasaasi ah ka soo saartay diyaaradii ay DF ka celisay Hargeysa
Hargeysa (Caasimada Online) – Xukuumada Somaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi ayaa si rasmi ah uga hadashay diyaarad ay shalay hawadeeda ka celisay dowladda federaalka Soomaaliya.
Diyaaradaasi oo la sheegay inay siday Qaad/Jaad oo kasoo kacday dalka Kenya ayaa dib loo celiyay, xili ay rabtay inay kasoo dagto madaarka magaalada Hargeysa ee Cigaal International.
Somaliland ayaa celinta diyaaradaasi ku tilmaamay bur-bur markale soo food saari kara wada-hadalada bilowga ah ee kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha dibedda Somaliland, Yaasiin Faratoon ayaa ka dhawaajiyey inay saameyn ku yeelanayso arrintaasi wada-hadalada labada dhinac, maadama dhawaan heshiis hordhac ah laga gaaray arrimo ay kamid tahay hawadu.
Wasiirka ayaa u arka in dowladda federaalku ay wado faro-gelin toosa, maadama ay ku doodo Somaliland inay tahay dal ka madax-banaan dowladda Soomaaliya, wallow aysan helin aqoonsi caalami ah.
Diyaaradaasi shalay ay celisay dowladda federaalku ayaa siday qaad fara badan oo ah nooca loo yaqaano Miirooga, midaasi oo u rarneyd ganacsatado reer Somaliland, kadib hoos u dhac weyn oo ku yimid tirada qaadkii Itoobiya looga keeni jiray Somaliland.
Dowladda federaalka ayaa diyaaradaasi u celisay sababo la xiriira xayiraadaha ka dhashay Covid-19 oo weli hakad ugu jiro duulimaadyadii caalamiga ahaa, inkasta la fasaxay kuwii gudaha.
Somaliland ayaa iyadu u aragta talaabooyinka noocan ah ee dowladda federaalku ay qaado, kuwo lagu beegsanayo madax-banaanida ay muddada 29-ka sanno ka badan ay baadi-goobeyso.